Sakoroka tao Dondona-Itasy: Sivily 3 maty, olona 5 naratra ka Zandary ny 1
mercredi, 08 janvier 2020 21:04
Sivily miisa telo no maty, olona dimy no naratra, ka sivily ny efatra ary Zandary ny iray. Izay no vokatry ny fahadisoana mihoapampana nataon'ny Zandary kilasy ambony iray miasa ao « Poste Fixe » ao Dondona Distrikan’i Soavinandriana, Faritra Itasy ny talata 07 janoary 2020.
Nifanolana tamin'ny sivily mpivarotra trondro iray ilay Zandary omaly tolakandro, ka rehefa tsy afa-po tamin'ny resaka vola ity zandary dia nampihatra herisetra ka torana ilay mpivaro-trondro. Nihevitra ilay zandary fa maty ilay mpivarotra nokapohiny ka nilefa izy.
Tezitra noho izany ireo Fokonolona nanatri-maso ka naterin'izy ireo teny amin'ny tobin’ny Zandary « Poste fixe » ilay mpivaro-trondro sady nikasa hitady ilay zandary izy ireo. Tsy hita tao ity farany ka notadiavin'izy ireo tany an-tranony ka tratra tao.
Niditra amboletra tao avy hatrany ireo Fokonolona ka namaly tifitra ilay zandary ho fiarovan-tenany.
Vokany, sivily telo no maty, raha efatra kosa no naratra mafy ny roa naratra noho ny fifanosehana ary ilay zandary naratra teo amin'ny lohany sy vavany voakapoka. Potika ny trano sy fanaka an'ilay zandary.
Nidina tany an-toerana nijery ifotony sy namonjy ireo naratra sy nandamina ireo Fokonolona ny Commandant de Brigade sy Sefo Distraikan’i Soavinandriana rehefa naheno izany. Nosamborina avy hatrany ilay zandary ka nogiazana ny basy teny aminy.
Rehefa tonga teny an-toerana ny Commandant de Compagnie Soavinandriana sy ny Commandant de Groupement Itasy dia nandray an-tanana ny raharaha ka nanao ny famangiana ireo mana-manjò sy ireo naratra izay efa tsaboina ao amin'ny CSB2 ao Soavinandriana ary nanokatra ny famotorana.